Na-esi na smoked smoked-eme ya onwe gị - Smokehouse - 2019
Kedu esi eme ka ụlọ sịga na-ekpo ọkụ na-ese si na ngwaọrụ ndị dịnụ
Aromatic, smelling of smoke and spices meat or whickdy fish ọkụ na-ese siga ichota okpokoro ezumike, weta ihe di iche iche kwa ubochi ma mee ka onodu di iche iche n'echeghi echefu.
Uru na ọghọm nke ọkụ na-ekpo ọkụ na-ese siga
Usoro nke ịme ụlọ ọkụ, ngwá ọrụ na ihe ndị dị mkpa
Smokehouse si friji
Ụlọ ịwụ anwụrụ ọkụ
Ụlọ ọkụ ụlọ na Mangal
Ịgba anwụrụ brick
Ngwaọrụ na ụkpụrụ nke ọrụ ụlọ ọkụ na-ese siga
Ịkwadebe usoro ịṅụ sịga na-ekpo ọkụ nwere ike ịbụ nnukwu ndepụta nke ngwaahịa: mmanu abuba, anụ, anụ ọkụkọ, azụ na akwụkwọ nri. Nkwadebe na-ewere ọnọdụ n'okpuru mmetụta nke anwụrụ ọkụ na okpomọkụ, nke e nyere site na mma ọkụ nke osisi. Usoro nke anwụrụ ọkụ na-ese si n'otu awa ruo awa isii, dabere na ngwaahịa ahọrọ.
N'okpuru ebe obibi anwụrụ ọkụ dị mma osisi, pre-chopped, n'elu ya bụ pan pụrụ iche, ebe ihe ọṅụṅụ ahụ na-ezo na ngwaahịa a na-ese anwụrụ. N'ebe dị anya, gratings dị ebe a na-ahọpụta ngwaahịa ahụ. Na-ese anwụrụ a na-enwe oghere maka anwụrụ ọkụ. Ọkụ n'okpuru ụlọ anwụrụ ọkụ ekwesịghị ịdị oke ọkụMmiri kachasị mma maka usoro ahụ sitere na 45 ruo 55 Celsius C. N'ụzọ dị mkpa, osisi ahụ ekwesịghị ịgba ọkụ, ọ ga-esi ísì.
Ịṅụ sịga - ọ bụghị naanị ọgwụgwọ nke ngwaahịa ahụ, kama ọ bụ ichebe nchebe. N'okpuru usoro anwụrụ anwụrụ na-efunahụ mmiri, nke na-enye aka na nchekwa nchekwa oge. Ịṅụ sịga na ụzọ dị ọkụ adịghị ewe oge dị ukwuu, ọ dị mma maka ngwaahịa ndị na-abụghị abụba. Enwere ike ịme ụlọ ọkụ na-ese anwụrụ ọkụ n'ọnọdụ ọ bụla dị mma site na iji ihe nchekwa.
Ntube nke ulo anwụrụ anwụrụ adịghị mgbagwoju anya, ha nwere ike ịmepụta ihe. Enwere ike iji igwe anwụrụ ọkụ na-ese anwụrụ n'èzí, mgbe ị na-apụ apụ. Ịṅụ sịga adịghị achọ nhazi ọ bụla ọzọ nke ngwaahịa. Ụlọ ọkụ na-eme onwe ya kwesịrị ekwesị na mpaghara ndị ahụ dị mfe, ọ naghị esi ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ na achọghị ego ọhụụ.
Ikpe ikpe site na nyocha nke ndị nwe obi ụtọ, enweghi ntụpọ n'ime ụlọ ndị ahụ. Naanị ihe a pụrụ ikwu ma e jiri ya tụnyere okporo ụzọ ịṅụ sịga bụ na ngwaahịa ahụ nwere obere ndụ ndụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke carcinogens n'oge nsị.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị kpebie iji osisi birch mgbe ị na-ese anwụrụ, jide n'aka na ị ga-ewepu ogbugbo ahụ, ma ọ bụghị nke ahụ, ngwaahịa ahụ ga-enwe oge obi ilu.
Mgbe ị na-etinye ụlọ anwụrụ ọkụ na saịtị ahụ, ọ ga-adị mma ịkwado ya n'ụzọ dị otú a ka ísì na anwụrụ ọkụ ghara ịbanye n'ụlọ gị na onye agbata obi gị. Nhọrọ ọnọdụ - na obere ugwu, ma ọ bụrụ na e nwere mkpọda na saịtị gị, enwere ike iji ya mee ihe maka ụlọ smokehouse.
Ebe n'okpuru ụlọ anwụrụ ọkụ na-ahọrọ mbara ma dị anya site n'ụlọ. Nke mbụ, ísì ahụ agaghị abụ ihe dị n'ime ụlọ, nke abuo, ị gaghị enwe ume iku ume na ngwaahịa nke combustion. Oké okpomọkụ na anwụrụ ọkụ ga-egbochi osisi ahụ, ya mere, mgbe ị na-ahọrọ ebe, cheba ama ogo nke ịgha mkpụrụ. Ejila osisi rụọ ụlọ, ha nwere ike ịchapụ site na ikpughe na okpomọkụ. Na -elekwa nchekwa nchekwa ọkụ: ekwesịghị inwe ihe ọkụ ọkụ n'akụkụ ụlọ anwụrụ ọkụ.
E nwere ike ịmepụta oriọna mmanụ site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. Ma ihe mgbochi na ịwụ nwere ike ịmegharị n'okpuru ozu smokehouse, ma ị nwere ike weld igbe dị na mpempe akwụkwọ ndị dị.
Ọ bụrụ na ị nwere friji ochie na-agba gburugburu, agbala ọsọ iji tụfuo ya. Ọ dị mfe ma dị mfe ịṅụ sịga na-ese siga na ya. Akụrụngwa na ngwaọrụ, dị ka ụkpụrụ, agaghị adị mkpa, ma e wezụga ígwè mpempe akwụkwọ maka akara, ọ bụrụ na enwere oghere n'ahụ. Refrigerator n'efu site na mpaghara plastik na plating.
E kwesịghị ịchụpụ grates dị n'ime ya: ha ga-enweta ngwaahịa. N'okpuru ikpe ahụ, wụnye stovu eletrik, ka ọ kpoo mkpuchi maka ihe dị ka nkeji atọ. Mgbe ahụ gbanyụọ stovu ahụ, wụsa ájá n'elu gburugburu ma detuo nri ahụ mechie ụzọ. Maka azụ, oge ga-abụ awa isii, maka anụ ogologo.
Usoro kachasị mfe maka ịme ụlọ na-eme ka ọ na-esi na bọket ochie. Osisi a kwesịrị ekwesị maka obere ngwaahịa. Maka ọrụ ị ga - achọ: ịwụ, ihe mkpuchi (site na ya ma ọ bụ kwesịrị ekwesị na nha), ihe nkedo (nke bekee nke bọọlụ kwekọrọ ya ka ọ ghara ịda n'ala), waya maka ịkpụ mkpara na nko, ihe nkedo, ntu 120 mm na ome.
N'ebe ala nke itinye osisi osisi, mgbe ahụ grate. N'elu elu nke ịwụ ị ga-achọ ime oghere maka waya na nko nke ngwaahịa ga-ekwusi. Meekwa oghere n'elu ịwụ maka anwụrụ ọkụ. Enwụrụ ọkụ na-adị njikere. Mgbe ị na-etinye ibe gị, tinye ọkụ ahụ, ozugbo enwere ọkụ ọkụ ma malite ịmalite, tinye ihe ndị ahụ na nko.
Ntị! Ọ dị oke mma iji osisi coniferous maka ise siga. Enwere otutu ntan n'ime osisi ha.
Tupu ịme ụlọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ si na mgbọm ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ kwadebe akpa ahụ n'onwe ya. Mkpụrụ ọka dị mkpa iji tufuo agba. Iji mee nke a, kpoo ya maka otu awa na ọkụ, agba ahụ ga-agbada. Okwute osisi ahụ kwesịrị ka a sachaa ya kpamkpam.
Ị ga-achọ ụdị ngwá ọrụ na ihe ndị a: plywood mpempe akwụkwọ, ngwongwo ígwè (0,6 cm n'obosara), ígwè hacksaw metal, waya maka mkpara, ihe eji emepụta ihe, ọkpụkpụ na ihe dị mkpa, ihe mpempe ígwè.
Site na ọkpọ ahụ na-eme ka otu iko na-etinye aka na ala nke gbọmgbọm ahụ. Ọ dị mkpa mgbe ị na-eji blowtorch dị ka isi iyi ọkụ. N'ihe banyere gbọmgbọm ahụ, mee oghere maka mkpara ndị a ga-etinye na grille. Dabere nha nke mbadamba na ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa, ị nwere ike ịwụnye ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Site na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-eme ka ọ bụrụ abụba, wụnye ya, ma n'elu ya.
Tinye ibu n'elu mkpuchi elu nke edere plywood iji kwụsie ike na ihe dị mma. N'ime ụdị anwụrụ ọkụ a na-ese anwụrụ ọkụ, ị nwere ike ịṅụ sịga n'ejighị ọkụ, kama na ọ bụ azụ ma ọ bụ anụ na nko.
Ụlọ anwụrụ ọkụ si n'ekpo ọkụ na-achọ obere mgbalị iji rụpụta. Ihe kachasị mma na ngwaọrụ dị otú ahụ - ọ ga - ejikọta ọtụtụ ọrụ. Maka ịmepụta, ị ga-achọ nnukwu mbadamba na ala, igwe ejiji ọkụ, ihe mpempe akwụkwọ maka ọnụ ụzọ, ihe nfe.
Wụnye ihe oriri n'ime ihe ahụ; weldụ ụzọ kama mkpuchi. A ghaghị itinye mbadamba ahụ na brazier na-agha ụgha, nke mere na ọ na-adịghị edozi. Na ala n'okpuru grate lay sawdust. Na ncha na-eme ọkụ. Ọfụfụ si na grill dị mfe ịkwakọ ma jiri mgbọrọgwụ maka nzube ya.
Ị ma? Dị ka ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme si kwuo, ndị Juu bụ ndị mbụ na-ese anwụrụ na anụ. Ha kweere na anụ ọkụkọ na-ese anwụrụ na-asachapụ mmehie.
Maka ihe owuwu, ị ga-achọ brik, ngwa ngwa, ihe ndị e ji ígwè rụọ, akwa akwa, nkuku ígwè, wires, mbadamba na ụrọ.
Maka usoro dum, nke mbụ, a chọrọ ntọala a pụrụ ịdabere na ya. Mgbe ị chọpụtara nha, biko mara na ụlọ na-ese anwụrụ kwesịrị okpukpu abụọ nke igbe ọkụ. Mgbe ọ na-ewu ya ka mma iji brik sima. Malite ịmalite n'akụkụ, na-eme ka ha sie ike, gbalịa ịgbaso ọbụna usoro nhazi. Maka ndokwa nke ọkụ ahụ ka mma ịhọrọ ígwè na-ere ọkụ.
Tupu ịwụnye bọtịnụ ọkụ, jide n'aka na ọ dị mma idozi na nkuku na akwa akwa. Mgbe ụlọ na-echefughị ​​banyere ọkpụkpụ ahụ, ọ ga-edere na nkeji iri anọ nke ogo nke usoro ahụ. Debe "mkpuchi" mkpuchi ahụ. A na-eme ihe mkpuchi nke planks osisi. N'ikpeazụ, n'okpuru ya, ị nwere ike ịdakwasị ụgbụ maka mgbatị. Usoro ịṅụ sịga na ịkụ anwụrụ brik na-ekpo ọkụ bụ otu ihe ahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Mmasị N'ihe na-ese anwụrụ ọkụ maka ọgwụgwọ nke ngwaahịa anaghị achọ ka mgbakwunye nke abụba, ya mere, nri dị otú ahụ adịghị ebu cholesterol, nke bụ ihe e ji mara nri eghe. Ya mere, iri nri na-ese siga, ahụ na-enweta nanị abụba ndị dị na ngwaahịa.
Ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na ọkụ ọkụ anwụrụ ọkụ nke na-eme n'oge ọkụ na-ezughị ezu nke nkụ, budata mma na ụcha nke ngwaahịa. A gaghị atụ aro ka ị gbanye ọkụ n'ọkụ na-agba anụ: ọ nwere ike ịkpata ọkụ. Ojiji nke ngwaahịa na-ese siga na-adabere na osisi ị na-ahọrọ.
Dịka ọmụmaatụ, ụcha odo odo na-acha odo odo ga-enye ngwaahịa alder na oak ibe. Maka brazier, a na-egbutu osisi ahụ ma kpuchie ya na sawdust, ya mere, ha anaghị ere ọkụ, mana ha na-ere ọkụ, nke bụ ihe dị mkpa maka ise siga. Iji nweta anwụrụ ọkụ na-esi ísì ụtọ mgbe e guzobere coal, kpochie oghere niile. Maka ngwaahịa ndị dị mma, na-ele anya na okpomọkụ, a ghaghị ịwụfụ ahịhịa dị ka ha na-esi ísì. Ọ bụ ihe na-adịghị mma ka ị na-emeghe mkpuchi mgbe niile iji chọpụta ogo nke ịdị njikere.
Mee nlele nkeji iri anọ mgbe ịmalitere usoro ahụ. Iji chọpụta ọnọdụ okpomọkụ na oriọna mmanụ, ị nwere ike ịme mmiri na mkpuchi, na mmiri kachasị mma maka usoro ahụ, mmiri ahụ ga-ekpochapụ nke ọma. Dị ka nkụ, ọ ka mma iji osisi sitere na osisi osisi: apụl, cherị, na oké osimiri buckthorn.
Ịkwanye ụlọ anwụrụ ọkụ na saịtị nke gị, ị ga-enwe ike ịtọ ezinụlọ gị ụtọ nke ukwuu, nke kachasị mkpa, na-enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ, na nri ma n'ụbọchị izu ụka na ụbọchị ezumike, yana ịme enyi na ndị agbata obi gị.
Kedu cumin bara uru: ihe onwunwe, ntụziaka, ngwa
Kedu ka ụmụ ahụhụ Danadim na-agba ahụhụ na-esi egbochi ụmụ ahụhụ ahụhụ osisi?
Ọrịa bụ isi nke rhododendrons na ọgwụgwọ ha
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu esi eme ka ụlọ sịga na-ekpo ọkụ na-ese si na ngwaọrụ ndị dịnụ